Dowlada Sacuudiga oo ugu dambeyn qiratay dilkii Jamal Kashoqgi & saraakiil xabsiga lagu guray – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Dowlada Sacuudiga oo ugu dambeyn qiratay dilkii Jamal Kashoqgi & saraakiil xabsiga lagu guray
Sabti, October, 20, 2018(HNN) Dowlada Sacuudiga oo ugu dambeyn qiratay dilkii Jamal Kashoqgi iyadoo Boqorka Sacuudiga Salmaan Bin C/casiis uu xilkii ka qaaday ku xigeenka agaasimaha guud ee Sirdoonka Sacuudiga, ahaana la-taliyaha sare ee Dhaxal-sugaha dalkaasi Axmed Al-casiiri.
Amarka Boqorka Sacuudiga ayaa xilkii looga qaaday Axmed Al-casiiri, iyadoo sidoo kale uu boqorka xilka ka qaaday la-taliye sare oo darajo wasiir ka hayey xukuumadda Sacuudiga, kaasoo lagu magacaabo Sucud Al-qaxdaani, kuna caan baxay inuu isku xiraha kooxda Sacuudiga ee baraha bulshada ku weerarta mucaaradka dalkaasi.
Warka Sacuudiga kasoo baxay ayaa ku soo beegmay iyadoo ay telefoonka ku wadahadleen markii labaad Boqorka Sacuudiga iyo Madaxweynaha Turkiga, iyadoo saxaafadda Mareykanka ay maanta shaacisay in La-taliyaha dhaxal-sugaha oo ah ku xigeenka agaasimaha guud ee sirdoonka Sacuudiga dusha loo saari doono dilka Saxafiga Jamal Kashoqgi, taasoo hadda xaqiiqo noqotay.
Wakaalada Wararka Sacuudiga ayaa shaacisay in Xeer ilaalinta Sacuudiga ay caddeysay in Jamal Kashoqgi ku dhintay Xarunta Qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbuul kadib dood dhex martay isaga 18 Sacuudiyaan ah, sida warku sheegay.
Waxay kaloo Wakaaladu kasoo xigatay xeer ilaalinta Sacuudiga in la xiray 18 qof oo kiiskan ku lug lahaa, iyadoo baaritaan lagu hayo. Waxaa kaloo xilalka laga qaaday saraakiil dhowr ah oo ka tirsan Sirdoonka, kuwasoo qeyb ka ahaa kooxda dilka saxafiga ka qeyb qaadatay.
Dhinaca kale Boqorka Sacuudiga ayaa soo saaray amar kale oo dib u habeyn lagu sameynayo hay’adda sirdoonka Sacuudiga, iyadoo loo xil saaray guddi wasiiro oo uu madax ka yahay dhaxal-sugaha dalkaasi Maxamed Bin Salmaan.
Dowladda Sacuudiga ayaa warkan soo saartay 18 maalmood kadib markii cadaadis lagu saaray arrinta saxafiga Jamaal Khashoqgi oo lagu waayey Qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul.
Dowlada Sacuudiga oo ugu dambeyn qiratay dilkii Jamal Kashoqgi & saraakiil xabsiga lagu guray added by Ciise Cabdi Ciise on 20/10/2018